Zimbabwe Yotarisana neDambudziko reKushomeka kweMvura muMaguta nekuMaruwa
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemvura, uye gurukota rezvemvura, Amai Oppah Muchinguri Kashiri, vanoti izvi hazvisati zvambotika mukati memakore makumi mashanu apfuura.
Vanotiwo vakatokumbira dare remakurukota kuti rivape mvumo yekugovera mvura mumatunhu ese.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nemusi weChishanu maererano nemamiriro akaita nyaya yemvura munyika, Amai Muchinguri Kashiri vakati kunyange hazvo hurumende yakapa bazi ravo mamiriyoni manomwe emadhora ekuderedza dambudziko rekushaikwa kwemvura munyika, dambudziko iri rakakura chose uye madhamu mumatunhu ese munyika asara nemvura shoma.
Amai Muchinguri Kashiri vakati dambudziko remvura rakanyanyisa kuMasvingo uko vati madhamu eko ave nemvura iri pasi pezvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana.
Vanoti panguva ino yegore madhamu mazhinji angadai aine zvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi mazhinji acho angora nezvikamu makumi mana kubva muzana.
Vanotiwo kunze kwemadhamu, zvibhorani nematsime akakawanda ari kupwa nekuda kwekupisa kwezuva. Vati zviborani zvinodarika zviuru gumi munyika zvakatopwa uye hurumende iri kutora matanho ekuona kuti pacherwa zvibhorani nematsime akadzika.
Amai Muchinguri Kashiri vatiwo kunyange hazvo mvura isina kunaya zvakakwana mwaka uno, magariro anoita vanhu, nyaya dzekurima pedzyo nenzizi nemadhamu ndizvo zvimwe zvave kuita kuti madhamu akasike kupwa mvura.
Vakurudzirawo vemaindasitiri, vemigodhi, makanzuru pamwe neveruzhinji kuti vashandise mvura zvinemwero pamwe nekudyara miti izvi vati zvinobatsira mukuchengetedza mumvura. Vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nekatsika kekuvaka, nekurima pese vachiti izvi zviri kukonzera kuti madhamu akurumidze kuoma.
Zvichakadaro, mukuru wekambani yehurumende inoona nezvemvura yeZimbabwe National Water Authority VaJefta Sakupwanya vati kambani yavo yakatarisana nedambudziko rekushaya mari sezvo makunzuru mazhinji munyika asiri kubhadhara mvura yaanoshandisa.
Amai Muchinguri Kashiri vakurudzira makanzuru kuti abhadhare mvura yaanoshandisa vachiti izvi zvinobatsira kuti kambani iyi iiite basa rayo nemazvo.
vatiwo vachaita musangano svondo rinoouya wekuzeya dambudziko remvura munyika pamwe nekuti ringagadziriswe sei.
Makunzuru akawanda munyika akaita seHarare, Chitungwiza, Masvingo nemamwe akatotanga kugovera mvura kuvagari nenyaya yekuti mvura yavo shoma mumadhamu avo.
VeChitungwiza Residents Trustvanotiwo vachaitawo musangano svondo rinoouya nekanzuru yavo pamwe nemakambani anoita zvemvura nechinangwa chekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha iri.
Dambudziko iri richanyanya kukura sezvo hurumende isiri kuvakawo madhamu.